gvSIG 1.9 RC1, diyaar u ah inuu soo dejiyo - Qodobo
Ogast, 2009 GvSIG
Waxay diyaar u tahay soo qaado gvSIG 1.9 RC1, waa markii ugu horeysay ee loo sharaxo musharaxnimada musharaxnimada (Bixinta Shaacinta) laga bilaabo 1243 Build 313 ee Agoosto.
Download ayaa qaatay waqti, sababtoo ah markii hore waxa ay ahayd adeegga gvsig.org, laga bilaabo halka laga keeno dhismaha, ka dibna waxa la heli karaa marka la joojinayo iyo fulinta waxay u muuqatay ficil musuqmaasuq. Laakiin ugu dambeyntii halkan waa, inaanu isticmaalno, tijaabino oo aan soo sheegno dhibaatooyinka.
Waqtigan xaadirka ah ma aanan helin fariimo qariib ah, waxaan u isticmaalayaa Acer Aspire One Netbook, waxayna u muuqataa inaanan dilin xasuusta badan, inkastoo Ma aha mashiinka waxqabadka sare. Waxaan aqoonsanayaa mashaariicda hore loo abuuray waxaanan rajeynayaa inaan tijaabiyo shaqadooda maalmahaas xilliga firaaqada.
Wixii horumarin ah, waxaa jira dad badan, waxaan qaadan doonaa waqti si aan u tijaabiyo, marka ugu dambeyntiina way ku haboontahay in aan haysanno nuqul muujinaysa baahiyaha iyo dhibaatooyinka bulshada soo foodsaartay.
Noocyada aan fiicnayn:
Guddiga dhinaca maareynta lakabka waa mid aad u shaqeynaya, laakiin hadda waxaan la kulmay raaxo daro aan loo dulqaadan karin kooxa lakabka. Mid ka mid ah sababaha isu-ururinta waa in la maamulo maareyn dheeraad ah, calaamaddaha dheeraadka ahina waxay u oggolaanaysaa in ay qarinayaan qaybaha lakabka ee kooxda.
-Laakiin mar kasta oo isbeddel sahlan loo adeegsado guddiga lakabka lakab sida:
Ku dhaji lakab cusub
Beddel calaamadda lakabka
Samee koox cusub oo ah layers
Hoos ka dhig koox kooxeed
Ku rid lakab gudaha koox gaar ah
Dhammaan kooxahaa ayaa lagu soo bandhigaa hab muuqaal ah, iyagoo noqonaya daal badan haddii aad haysato dhowr. Anigu sidoo kale ma heli karo sabab sababta, waxaan u malaynayaa inaan sii wado isuduwidda hawlaha.
Si aad u dhadhamiso
Noloshu waxay ku jirtaa beesha dhexdeeda, waxaan ku talinaynaa inay soo dejiyaan, ka ciyaaraan, isku dayaan, ha u isticmaalin shaqada rasmiga ah, laakiin ka qaybgalaan ansixintooda, maaddaama taasi ay ku xiran tahay inay ku qanacsan tahay ku qanacsanaanta qaabka deggan.
Halkan waxaad ka heli kartaa download version oo halkan waad arki kartaa liiska wararka.
Post Previous«Previous Google Earth wuxuu hagaajinayaa habka aad u soo sheegayso cusbooneysiintaada
Post Next Halkee laga iibsan karaa GPSNext »